एसडी मुनिको स्वीकारोक्ति : भारत सारा छिमेकमा फेल भइरहेको छ ! – erupse.com
नेपालले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाले जतिसुकै चर्को–चर्को कुरा गरे पनि नेपालको मामिला बुझ्ने कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकचाहिँ निकै अत्तालिएको पाइएको छ ।
नेपालको मामिलाका जानकार मानिने भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनिले त नेपालको मामिलामा मात्र होइन, सारा छिमेकमा भारत फेल भइरहेको स्वीकारेका छन् ।
हामी सारा छिमेकमा फेल भइरहेका छौं : एसडी मुनी
जे अहिले भएको छ, यो राम्रो होइन हाम्रा लागि । यसलाई बातचितबाट हल गर्नुपर्छ । हामीले मानि पनि सकेका छौं कि बातचितबाट हल गर्नेछौं । यसलाई राजनीतिकरण गर्नु न नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ, न हाम्रो दीर्घकालीन हितमा छ ।
यसको सीधा समाधान जो हुनेछ, यसमाथि नेपालसँग के दस्ताबेज छ, उनीहरु १८१६ को सन्धीको कुरा गरिरहेका छन्, त्यो सही हो । हामी पनि १८१६ को सन्धीलाई मान्छौं । तर, यसको व्याख्या हाम्रो अलग–अलग छ । जो नदी र त्यसको मुहानमा छ । यसका लागि हिन्दुस्तानसँग पनि आफ्नो दस्ताबेज छ । दुबै पक्ष बसेर आरामका साथ बातचित गरेर यसको फैसला गर्नुपर्छ ।
चीनको जुन प्रभाव बढिरहेको छ, जो एक वास्तविकता हो । यो सिर्फ नेपालमा मात्रै बढिरहेको छैन । हाम्रो चारैतिर बढिरहेको छ । श्रीलंकामा, म्यानमारमा, बंगलादेशमा, पाकिस्तानमा, मालदिभ्समा । कहाँ बढिरहेको छैन ? सारा एशियामा चीनको प्रभाव बढिरहेको छ । यो भारतका लागि एउटा ठूलो चुनौती हो । र, यो चुनौती नेपालबाट कैयौं ज्यादा बढी छ ।
यो चुनौतीको सामना गर्नका लागि हामीले एक रणनीति सुचारु रुपबाट बनाएर चलाउनुपर्छ । नत्र हामी पछाडि पर्नेछौं । अहिले पनि मलाई लाग्छ कि हामी पछाडि परिरहेका छौं । यसले गर्दा हामी बहुत सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
तेस्रो, यो सब जुन पहलु हो, यो इमोसनल नेस्नालिजम, राष्ट्रवादको पहलु हो । हाम्रा सारा छिमेकीले एक यस्तो राष्ट्रवाद सुरु गरिदिएका छन्, जसमा भारतउपर निशानाबाजी गर्छन् । यो उचित होइन । न छिमेकीहरुका लागि उचित हो, न भारतका लागि हो । यसका निम्ति एक राजनीतिक समस्याको हामीले सामना गर्नुपर्नेछ । अन्यथा यो स्थिति पछिल्लो तीन÷चार वर्षदेखि बिग्रिरहेको छ । र, अरु धेरै बिग्रिरहनेछ । र, चीन र पाकिस्तानजस्ताले उसलाई उक्साउने छन्, उसलाई अघि बढाउनेछन् ।
कहीँ न कहीँ हामी सारा छिमेकमा फेल भइरहेका छौं । हेर्नुहोस् श्रीलंकामा स्थिति बदलियो । राजापाक्षे पहिले राष्ट्रपति थिए, उनी दोस्रोपटक आए । जुन संयुक्त सरकार त्यहाँ बनेको थियो, यसको सहानुभूति भारतका लागि थियो, त्यो चाँडै खत्तम भयो । मालदिभ्समा सत्ता परिवर्तन भएको छ र हालत केही ठीक छ ।
हेर्नुहोस्, दुर्भाग्यको कुरा हो कि छिमेकमा जुन राष्ट्रवाद छ, त्यो भारतको विरुद्धमा छ । जसलाई हामी इन्टी इण्डियानिजम भन्न सक्छौं । जो राष्ट्रवाद सारा क्षेत्रमा बढिरहेको छ । भारतमा पनि बढिरहेको छ । नेपालमा पनि बढिरहेको छ । यसको हामीले प्रत्यक्षरुपले अनुभव गरिरहेका छौं ।
यसमा म मान्छु कि काफी हदसम्म हाम्रो कूटनीतिको वा राजनीतिको कमी पनि छ । तर, यसका साथसाथै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो कि वहाँका जो नौजवानहरु छन्, उनीहरुको जो भावना, आकांक्षा र महत्वाकांक्षा छ, उनीहरुले जबसम्म यो महसुस गर्न पाउँदैनन् कि यी आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भारतले मद्दत गर्नेछ, यसबाट भारतलाई कुनै लिनुदिनु छैन ।
हामी लामो कुरा गर्छौं, रोटीबेटीको कुरा गर्छौं । संस्कृतिको कुरा गर्छौं । हिन्दु धर्मको कुरा गर्छौंं । भाषाको कुरा गर्छौं । यी सबै कुराहरु बेइमानी हुन् । जबसम्म दैनिक काम र भविश्यको आकांक्षा पूरा गर्नमा यो पुरानो संस्कार काम लाग्दैन भने यसको भेल्यु कम भएर जान्छ । हामीले यो कोसिस गर्नुपर्छ कि जनताको लेबलमा । यसमा हाम्रो कमजोरी छ ।
भारतविरोधी राष्ट्रवाद र चाइना कार्ड अरु जटिल हुन्छ : पूर्वराजदूत
म दुई चिज भन्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिले त भारत र नेपालको सम्बन्ध बहुत प्रगाढ छ । दुबै देशवीचको यो जुन सम्बन्ध छ, यो जनस्तरको सम्बन्ध हो । यो केवल सरकारका वीचको सम्बन्ध मात्रै होइन । पहिलो पोइन्ट यो हो । दोस्रो, हामीसँग यति प्रगाढ सम्बन्ध छ भने केही न केही कठिनाइ त आउँछ । केही मतभेद हुन्छ ।
‘छिमेकी पहिलो’ नीति धेरै महत्वपूर्ण र जरुरी नीति हो । किनभने, हामीले हाम्रा छिमेकीका साथ हमेसा यो कोसिस गर्नुपर्छ कि हाम्रो सम्बन्ध अरु सुध्रियोस् । साथै म यो भन्न चाहन्छु कि कठिनाई हुन्छन्, किनकि हामी छिमेकी हौं, हामीवीच घनिष्ट सम्बन्ध छ । त्यसकारण कठिनाइको पनि उभार आउन सक्छ ।
दूरदराजका देशहरुका साथमा त हाम्रो न यति प्रगाढ मित्रता हुन्छ, न यति कठिनाई हुन्छ । कठिनाईहरु त हेर्नुहोस् जो भाइ–भाइ हुनछन्, उनीहरुका वीचमा आउँछन् । चनौती यो हो कि यी कठिनाईलाई कुन तरिकाले समाधान गर्ने ? सम्बन्धमा दरार आउनुहुँदैन र कठिनाइको पनि समाधान हुनुपर्छ ।
यो सीमाको जुन विवाद छ, यो काफी विवादित मुद्दा हो । र, यो आजको हैन, केही दशकदेखि यो मुद्दा चलिरहेको छ । यसप्रकारको मुद्दा सुल्झाउनका लागि वार्ता नै एक विकल्प हो । मलाई त लाग्छ कि वार्ताबाटै यस प्रकारका जुन मुद्दाहरु समाधान हुन्छन् ।
तेस्रो– जहाँसम्म चीनको सवाल छ, मलाई लाग्छ कि पछिल्ला केही दिनमा, केही महिनामा, एक÷दुई सालमा चीनको प्रभाव नेपालमा धेरै बढ्दै गइरहेको छ । यो न केवल कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट वा तिनको लगानीमा मात्र छ, चीन नेपालको आन्तरिक मामिलामा काफी हस्तक्षेप पनि गरिरहेको छ ।
हालको दिनमा हामीले देख्यौं कि ओलीजीको सरकारलाई आफ्नो पार्टीभित्रबाट काफी कठिनाई थियो । तब, यसमा चीनका राजदूतको अहम भूमिका रह्यो, यो सबै समस्या समाधान गर्नका लागि ।
चीनको भूमिका त निश्चय नै बढ्दै गइरहेको छ नेपालमा । यसका लागि भारतले केही रणनीति जरुर अपनाउनुपर्ने छ ।
जब नेपालमा केही कठिनाइ हुन्छ, आन्तरिक कठिनाइहरु हुन्छन् , वहाँको, खासगरी जो कम्युनिस्ट पार्टी छ, ऊ भारतविरोधी राष्ट्रवादको नारा दिन्छ । र, आफ्नो जुन घरेलु समस्या हुन्छ, त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने प्रयत्न गर्छ ।
यहाँ दुई चिज छन् ः एक त ऊ भारतविरोधी राष्ट्रवादको नारा, तपाईले देख्नुभएको छ, हाम्रा नेताहरुको पुत्ला जल्छन् । एम्बेसीको बाहिर धर्ना हुन्छ, घेराउ हुन्छ । दोस्रो– यो हुन्छ कि जब भारतसँग कुनै समस्या हुन्छ, तब नेपालको रुझान वा झुकाव चीनतिर हुन्छ । चीनसँग सहायता माग्छन् । म भन्छु कि आजको मितिमा काफी हदसम्म हामीलाई लागिरहेको छ कि चीनको भूमिका, प्रभाव नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपालमा कम्प्लिकेसन मैले जुन बताएँ, भारतविरोधी राष्ट्रवाद र चाइना कार्डको जुन ईस्यु छ, यसका ईस्यु अरु जटिल हुन्छ । यही हाम्रो सामुन्नेको चुनौती हो र यसको हामीले फेस गर्नु छ । र, यसको समाधान निकाल्नु छ । डिप्लोम्यासीको यही काम हो कि कुन प्रकारले हाम्रो मित्रता, हाम्रो कनेक्सन, रिलेसनसिप मजबुद बनाउने ।
निश्चय नै नेपालमा चीन एक फ्याक्टर त हो । मलाई लाग्छ, यो एक प्राथमिक इस्यु हो कि कुन किसिमले यो चुनौतीको सामना गरिनेछ ।
एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि भारतको जुन इन्गेजमेन्ट छ नेपालमा, त्यो हर तप्कासँग छ । हर पोलिटिकल पार्टीका साथ छ । सिभिल सोसाइटीका साथ छ । यो हाम्रो जुन इन्गेजमेन्ट छ, यसलाई अरु मजबुद गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ कि धेरै ठूलो चुनौती छ र यसलाई विल्कुल कूटनीतिक रणनीति बनाएर नै यसको समाधान गर्नुपर्छ ।